Guardrail Post Manufacturers & Suppliers - China Guardrail Post Factory
Ederede a bụ isi iji soro AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 na ọkọlọtọ EN1317. Ihe maka nke ahụ bụ Q235B (S235Jr mkpụrụ ike karịrị 235Mpa) na Q345B (S355Jr mkpụrụ ike karịrị 345Mpa). N'ihi na ọkpụrụkpụ nke guardrail tumadi site na 4.0mm ka 7.0mm ma ọ bụ soro ndị ahịa ina. Igwe na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, ịgbaso AASHTO M232 na nha anya dịka AASHTO M111, EN1461 wdg. A na-etinye post ahụ n'ime ...
Ederede a bụ isi iji soro AASHTO M180, GB-T 31439.1-2015 na ọkọlọtọ EN1317. Ihe maka nke ahụ bụ Q235B (S235Jr mkpụrụ ike karịrị 235Mpa) na Q345B (S355Jr mkpụrụ ike karịrị 345Mpa). N'ihi na ọkpụrụkpụ nke guardrail tumadi site na 4.0mm ka 7.0mm ma ọ bụ soro ndị ahịa ina. N'elu ọgwụgwọ na-ekpo ọkụ tinye kpaliri, na-eso AASHTO M232 na hà ọkọlọtọ dị ka AASHTO M111, EN1461 wdg The post arụnyere int ...
Gburugburu udi post